छोरीको ह, त्या गर्न १ लाख ५० हजार ‘सुपारी’, आमाबाबुको योजना विफल भएपछि फेरि १ लाख! – Dainik Sangalo
November 30, 2020 749
रौतहट – रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका–७ की १७ वर्षीया युवतीको गो, x ली हा, नी ह, x त्या भएको घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। लौकाहाका स्थानीय रामअयोध्या साहकी छोरी अमृताकुमारीको ह, x त्यामा उनकै आमाबाबुसहित ७ जना प, क्राउ परेपछि घ, टनाले नयाँ मोड लिएको हो।
ह,x त्या भएकी अमृताका बाबु रामअयोध्या साहतेली, आमा सीतादेवीलाई प्रहरीले प क्राउ गरेको हो। ह, x त्याका अर्का योजनाकार एवं रामअयोध्याका अर्का ज्वाइँ लक्ष्मण साह फ, रार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सिद्धिविक्रम शाहले जानकारी दिएका हुन्।
सुपारी लिएर अमृताको हत्या गर्ने देवाही गोनाही नगरपालिका–२ करुनिया लक्षमिनियाँका ६० वर्षीय शेख अलियास, सोही ठाउँका ४० वर्षीय बहुदल भनिने इस्लाम अन्सारी, ३५ वर्षीय शेख इन्ताज, ५० वर्षका कैमुल देवान र परोहा नगरपालिका–४ का ४५ वर्षीय छोटेलाल साहलाई प्रहरीले प, क्राउ परेको छ।
अदालतद्वारा ७ दिन म्याद थप
जिल्ला अदालत रौतहटले ह, x त्याको अ, नुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि ७ दिन म्याद थप गरेको छ। प्रहरी उपरीक्षक शाहका अनुसार एक अभियुक्तको खोजी भइरहेको छ।
‘अ, नुसन्धान भइरहेको छ, छोरीको ह, x त्या गर्न शुरुमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएको खुलेको छ, तर आमाबाबुको पहिलो योजना वि, फल भएपछि फेरि १ लाख रुपैयाँ दिएर छोरीको ह, x त्या गराएको अभियुक्तहरूले स्वीकारेका छन्,’ शाहले नेपाली पब्लिकसँग भने।
आरोपी सबैले घ, टना स्वीकार गरिसकेको प्रहरीले बताएको छ। अ, भियुक्तहरूमाथि ज्या, x नसम्बन्धी मु, x द्दा दर्ता गरी जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अ, नुसन्धान तीव्र पारिएको छ।
यस्तो छ घ, टनाको पृष्ठभूमि
रामअयोध्याकी छोरी अमृताको छिमेकी सोसिन्द्र भगतसँग पछिल्लो तीन वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको थियो। अमृता र सोसिन्द्रको प्रेम थाहा भएपछि बाबुआमाले जबरजस्ती वि.सं. २०७६ साल असारमा सर्लाही विशुनपुर गाउँपालिका–३ का रुपेश साहसँग अमृताको बिहे गरिदिए।
अमृता केही महिना सर्लाही विशुनपुरमा रहेपछि उनका श्रीमान् रुपेशमाथि धा, x रि, लो ह, x ति, यारले आ, x क्र, मण भएको थियो। उक्त घ, टनामा रुपेशका परिवारले अमृता र उनका प्रेमी सोसिन्द्रमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा ज्या x न मा, x र्ने उद्योग मु, द्दा दर्ता गरेको थियो।
घ, टनापछि अमृता माइतीघर लौकाहामै बस्दै आएकी थिइन्। गत असारमा रुपेशसँग स, म्बन्ध वि, च्छेद भएको थियो। माइती बसेकी छोरी अमृता प्रेमी सोसिन्द्रसँग भागेमा समाजमा ‘हाम्रो इ, ज्जत जान्छ’ भनेर उनका बाबुआमाले छोरीलाई घरमै रोकेका थिए।
तर, छोरीलाई घरमै रोकेर राखे पनि उनीहरूको बेचैनी झन् बढ्यो। प्रेमीसँग छोरी भा, x ग्ने आ, शंकाले उनीहरूले अमृताको ह, x त्याको योजना बनाए। र, उपचारको बहाना बनाएर भारतमा लगे।
परोहाका छोटेलाल साहलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएर ह, x त्या गराउने रामअयोध्या र उनका अर्का ज्वाइँ देवाही गोनाही–२ करुनियाका लक्ष्मण साहले मिलेर योजना बनाएका थिए।
योजनाअनुसार अमृतालाई उपचार गराउने बहानामा सीमावर्ती भारतीय बजारमा केही महिनाअघि लगिएको थियो। तर, त्यहाँ योजना सफल हुन सकेन। रm अमृता माइतीमै आएर बसिरहेकी थिइन्।
रामअयोध्या र ज्वाइँ लक्ष्मणले इ, x ज्जतका लागि भनेर देवाही गोनाही–२ का कैमुल देवानलाई अमृताको ह, x त्या गर्न एक लाख रुपैयाँको सुपारी दिएको प्रहरी उपरीक्षक शाहले जानकारी दिए।
मुख्य योजनाकार कैमुलले अन्य अ, भियुक्तसँग मिलेर गत कात्तिक २६ गते राति आमासँग आफ्नो घरमै सुतिरहेका बेला ह, x त्या गरेका थिए।
आमा उठेर शौचालय जाँदा राति साढे ११ बजे अमृताको क, x ञ्चटमा गो, x ली हा, x नी ह, x त्या गरिएको थियो। घ, x टनापछि मृ, तकका श्रीमान्, प्रेमी र परिवारका सदस्यको अ, नुसन्धान गर्दै जाँदा अ, पराधी प, x क्राउ तथा ह, x त्याको योजना बाहिर आएको प्रहरी उपरीक्षक शाहले बताएका छन्।
अन्य ६ जना आरोपी यसअघि नै प, x क्राउ परे पनि मुख्य योजनाकार कैमुल सर्लाही मलङ्गवामा लु, कीछिपी बसेको अवस्थामा आइतबार प, x क्राउ परेको प्रहरी उपरीक्षक शाहले बताएका छन्।
Prevटेलिकमका अधिकृत पुत्रको अ’ प’ह’र’ण’ पछि ह’ त्या
Nextआफ्नै घरको दराज फोरिन्, लाखौं मुल्यका गहना अन्तै लुकाएर चोरी भयो भन्दै प्रहरी बोलाइन्
यातायात व्यवसायीको आन्दोलनले काठमाडौंमा ठूलो जाम
भोलीको राशिफल : वि.सं.२०७७ साल असोज २९ गते । बिहीबार । ईश्वी सन् २०२० अक्टोबर १५ तारिख
खुसीको खबर ! घरभेटी (घरधनी)हरुले बहाल करमा पाउने भए २५ हजार रुपैयाँसम्म छुट
उडिरहेको हेलिकप्टरमा चील ठोकिए पछी ठूलो झण्डै दु, घटना भएको भिडियो बाहिरीयो।